हाँस्दा जस्तै रुँदाका फाइदाहरु - स्वास्थ्य - कान्तिपुर समाचार
हाँस्दा जस्तै रुँदाका फाइदाहरु
कार्तिक २२, २०७४ डा. ललितकुमार मिश्र
काठमाडौं — जसरी हाम्रो स्वास्थ्यको लागि दिनको एक –दुई पटक दिल खोलेर हाँस्ने गर्नाले फाईदा हुन्छ । त्यसैगरि कहिलेकाही थोर-बहुत रुँदा पनि मन हल्का हुनुको साथै स्वास्थ्यलाई पनि फाईदा पुग्दछ ।
मनोचिकित्सकहरुको भनाई अनुसार कहिलेकाही रुनले कुनै प्रकारको हानि - नोक्सानी हुँदैन । रुनले व्यक्ति तनावरहित एवं आफुलाई हल्का महशुस हुन्छ । आँखाबाट झर्ने आँशु व्यक्तिको मर्म र भावनालाई अभिव्यक्त गर्ने एउटा सशक्त माध्यम हो भन्दा अतियुक्ति नहोला । जब कसैले हामीलाई आघात पुर्याउछ वा हामी अत्याधिक दुखी हुन्छौं, त्यस अवस्थामा हामी रुन्छौ । आखाँबाट आँशु झर्नथाल्छ । यसरी आँखाबाट खसेको आँशुले तनावबाट मुक्त गर्दछ । मनोबैज्ञानिकहरु भन्छन्, 'बिपत्ति, दुख र अत्याधिक तनावको स्थितिमा पनि यदि कुनै व्यक्तिको आँखाबाट आँशु आउँदैन अथवा रुँदैन भने सम्झिनु कि त्यो व्यक्ति मानसिक एवं शारीरकरुपले अस्वस्थ्य छ ।
यदि कुनै महिलालाई बिपतको घडिमा पनि आँशु आउँदैन भने सक्झिनुस्, त्यो महिला भित्रबाट नै सुकेको पात जस्तै हो वा पात बिहीन रुख जस्तै छ । आँशुको अभावको कारण आँखाको रोग, गठियाबात, घाँटीको रोग, स्वेतप्रदर आदि हुनसक्छ । भक्कानो छोडेर वा सुक-सुक गरेर रुनु शरीरको लागि स्वस्थ्य कर मानिन्छ । यस अवस्थामा व्यक्ति एउटा बालकको जस्तो शारीरिक एवं मानसिक तनावबाट आफुलाई खुला र खुकुलो छोडदिन्छ र रुन सुरुवात गर्दछ । जब मानसिक या शारीरिक दुख, दर्दस‌ँग व्यक्तिको मुठभेड हुन्छ, त्यसको प्रतिकृया स्वरुप हाम्रो शरीरको मांशपेशीहरु संकुचित हुन थाल्छन् । जुन शरीरको रक्षातन्त्रको एक प्रकृया हो ।
जुन बेला हामी दुर्घटनाबाट गुज्रिरहेका हुन्छौ, त्यसबेला अत्यfधिक पीडाले गर्दा, हामी आफुलाई सन्तुलन गर्न सक्दैनौ । शरीरले आफ्नो क्षमताको कारण अत्याधिक कठिन परिस्थितिमा पनि आफ्नो सन्तुलनलाई गुमाउदैन । जब कठिन परिस्थिति बितिसक्छ, तव मांशपेशीहरुमा जम्मा भएर रहेका तनाव आँशुको रुपमा आँखाबाट निस्किन थाल्छन् । एक स्वस्थ्य र सन्तुलित शरीर सहजताले दुख, दर्द, पीडाबाट उत्पन्न शारीरिक तनावलाई आँशुद्वारा व्यक्त गर्ने बाटो बनाउँछ ।
एक सर्वेक्षण अनुसार पुरुषको तुलनामा महिला कम तनावग्रस्त हुन्छन् । उनीहरु भावनालाई सजिलैसित आँशु को माध्यमले व्यक्त गर्दछन् । यसै कारण होला पुरुषको तुलनामा महिलामा ह्रदयरोग कम हुन्छ । कुनै-कुनै परिवारमा वंशानुगत एक किसिमको रोग पाईन्छ, जसलाई फैमिलियल डिस्टोनिया भनिन्छ । यसमा जव बच्चा रुन्छ तर उसको आँखाबाट आँशु झर्दैन । आँखा सुख्खा रहन्छ । यस्ता केटा-केटीहरु क्रुर, झनक्क रिसाउने र आक्रमक प्रवृतिका हुन्छन् । यस्ता बच्चाहरुको पूर्णरुपले मानसिक बिकास हुन पाउँदैन । आँशुले दुख, चिन्ता, तनाव, क्लेश तथा मानसिक तनावलाई फेस गर्नमा व्यक्तिलाई मद्दत गर्दछ । मनोचिकित्सकहरुका अनुसार रुनले मानसिक तनावबाट मुक्ति मिल्नुकासाथै उच्च रक्तचाप, फिस्टुला आदि जस्ता रोगबाट छुट्कारा पाउनमा सहायता मिल्छ । यसको अलावा तनावबाट उत्पन्न हुने मनोदेहिक रोगहरु हुने संभावना हुँदैन । रुने बेलामा आँखा बाट झरेको आँशुले आँखामा रहेको विजातीय द्रव्यलाई बाहिर निकाल्ने कार्य गर्नुको साथै आँखालाई रसिलो पार्ने तथा संक्रमणबाट बचाउने कामपनि गर्दछ । मेडिकल युनिभर्सिटी अफ ओहियो (जापान) का शोधकर्ताहरुले “आँशुबाट हुने फाइदा” आफ्नो अध्य्यनमा पनि पाए । रिपोर्टमा भनेका छन्, 'रोई सकेपछि अधिकतर मानिसहरु आफुलाई हल्का र ताजा महशुस गर्दछन् ।' शोधका अनुसार ८८.८ प्रतिशत मानिसहरु रोएपछि हल्का महशुस गर्दछन् भने ८.४ प्रतिशत मानिसहरु मात्र रुदा पनि दुखी नै हुन्छन् ।
यदि तपाइ आफ्नो दुखलाई भित्र लुकाएर राख्नु हुन्छ भने कहिलेकाही दिल खोलेर रुनबाट नतर्सनुस् । किनकी रुनले मन हल्का त हुन्छ नै यसको साथै स्वास्थ्यलाई पनि यसले फाईदा पुर्याउछ ।
आँखाको ज्योति बढ्छ:
आँखामा आँशु आउनाले आँखाको नानी र परेलीको रसिलोपन बढ्दछ । वैज्ञानिकहरुले यसलाई सिद्धागरेका छन् कि रुनले आँखाको सुन्दरता बढ्दछ । ति वैज्ञनिकहरुको मतानुसार आँखाको कर्नियाको परत कंजकटाईवालाई आश्रुग्रन्थीद्वारा निस्किने आँशुले ओसिलो बानाईदिन्छ । जस्को फलस्वरुप आँशुमा रहेका शारीरिरका तत्वहरुद्वारा सुन्दरता निखारेर आउँछ । आँखाबाट आँशु निस्किने बेला हारडेरीयन ग्रन्थीबाट एक प्रकारको तेलीय पदार्थ निस्किन्छ, जसको सहायताले कोर्निया नरम र गहिरो हुन् जान्छ । महिलामा पुरुषहरुको तुलनामा बढि आँशुको उत्पादन हुन्छ । यही कारण होकि महिलाहरुको आँखा बढि सुन्दर हुन्छन् । यद्यपी अत्याधिक रुनले आँखाको दृष्टी गुम्न पनि सक्छ ।
ब्याक्टेरियालाई समाप्त गर्छ :
आँशुमा यस्तो किसिमको एन्टिबायटिक्स् पाईएकोछ, जसले किटाणुबाट आँखाको रक्षा गर्दछ । आँशुमा एकप्रकारको लिसोजाईम नामक तरल पदार्थ हुन्छ, जसले ५ / १० मिनटमा नै नब्बे देखि पन्चनब्बे प्रतिशत ब्याक्टेरियाहरुको सफाया गर्नसक्छ । शरीरबाट टक्सिनलाई निकाल्दछ । अनुसन्धानबाट देखिएको कुरा के हो भने, जब हामी बढि दुखी वा अवसादमा हुन्छौ, त्यस्तो बेला शरीरभित्र केहि टक्सिन केमिकल्स बन्न थाल्छन् । जुन बिषक्त तत्वहरु रुँदा आँखाबाट आँशुको रुपमा बाहिर निस्किन्छ । मुड ठिक भएको बेला कहिलेकाही शरीरमा मेग्जिन नामक तत्व बढिभएर घबराहट, परेसानि, थकान, अनाहकमा रीस उठ्ने जस्तो समस्या देखिन्छ । यस अवस्थामा रुनले शरीरमा मेग्जिनको स्तर कम हुन्छ । जसको फलस्वरुप व्यक्ति आफुलाई हल्का, राम्रो महशुस गर्न थाल्दछन् ।
अत्यधिक तनावको अवस्थामा रुनले केहि मात्रामा राहत मिल्दछ । रुने प्रकृयाको दौरान शरीरमा एंडोफ्रिन ल्युकामाईन, एकांफालिन तथा प्रोलेक्टिन नामक तत्वहरुको स्तर कम हुन्छ । जसले गर्दा तनाव कम हुन्छ । तर यो सत्य हो, अत्याधिक रुनले यसको उल्टो पनि असर हुनसक्छ । त्यसैले आँशुको रहस्यलाई अहिले पनि बुझ्न र सुल्झाउन बाँकी नै छ । तर, यसमा कुनै सन्देह छैन की आँशु बगाउनु हाम्रो लागि लाभदायक र स्वास्थ्यकर छ ।
प्रकाशित : कार्तिक २२, २०७४ १२:५५
साढे ४ महिनामा पूर्वमा डेढ सयको ज्यान गयो
पश्चिमा पनि सडक दुर्घटना बढ्यो
कार्तिक २२, २०७४ लीलाबल्लभ घिमिरे, मोहन शाही
विराटनगर/ डोटी — पूर्वका ६ जिल्लामा सोमबार ७ वटा सवारी दुर्घटना भए । उदयपुरको सिद्धिचरण राजमार्गमा भएको दुर्घटनामा ९ जनाले ज्यान गुमाए । सप्तरीमा मोटरसाइल दुर्घनामा १ जनाको ज्यान गयो । मंगलबार साँझसम्म ३ वटा दुर्घटना भए ।
संखुवासभाको चैनपुर–तुम्लीङटार–हिले सडक खण्डमा भएको मोटरसाइकल दुर्घटनामा भोजपुर षडानन्द–६ का २६ वर्षका मदन खडाको मृत्यु भयो ।
दैनिकजसो हुने दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेको संख्या बर्सेनि बढिरहेको छ । पूर्वक्षेत्रीय ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका अनुसार साढे चार महिनामा मात्रै पूर्वमा डेढ सयजनाले ज्यान गुमाएका छन् भने हजारभन्दा बढी घाइते भए । यो अवधिमा ५ सय ५० वटा दुर्घटना भएका छन् ।
गत आर्थिक वर्षमा २ हजार १ सय ४४ वटा दुर्घटना भएकामा ४ सय ९८ को मृत्यु भएको थियो । ३ हजार ८ सय २० जना घाइते भएको पूर्व क्षेत्रीय ट्राफिक प्रहरी प्रमुख राजकुमार लम्सालले बताए ।
‘मोटरसाइकल दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेको संख्या बढी छ,’ लम्सालले भने, ‘दुर्घटना गराउनेमा किशोर उमेर समूह र मादक पर्दाथ सेवन समेत बढी पाइएको छ ।’ प्रमुख राजमार्गभन्दा भित्री सडकमा दुर्घटान बढ्न थालेको उनले बताए । ट्राफिकको पहुँच बाहिर बढी दुर्घटना भएको उनको भनाइ छ ।
तीव्र गति दुर्घटनाको अर्को कारण हो । दक्ष तथा अनुभवी चालक नभएका कारण पनि दुर्घटना बढी हुने गरेको उनको दाबी छ । ‘साँघुरा सडकले पनि दुर्घटना निम्त्याएका छन्,’ उनले भने, ‘सडक मर्मतको काम धेरैतिर एकैपटक हुनु, पैदल यात्रुका लागि भिन्न बाटो नहुनु, ट्राफिक नियमको पालना नहुनु, यात्रुका लागि अर्को बसलाई जित्न तीव्र गतिमा चलाउनु तथा गन्तव्यमा पुग्नका लागि समय सीमा कम तोकिनु दुर्घटनाका मुख्य कारण हुन् ।’
सुनसरी र मोरङमा उद्योग तथा कारखाना बढी भएका कारण मान्छेहरुको चाप हुने हुँदा दुर्घटना हुने गरेको प्रहरीको भनाइ छ । पैदलयात्रु हिँड्ने व्यवस्थित सडक पेटी नभएका कारणपनि दुर्घटना बढेको ट्राफिक प्रहरी बताउँछ ।
कुन चालक कति अनुभवी हो भन्ने मापन गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने चालक भोला कडेल बताउँछन् । चालकको दर्ता निर्धारण सर्वसाधारणले देख्ने गरी राख्नु पर्छ,’ कडेलले भने, ‘सडकमा चालक देख्दा हामीलाई नै लाज लाग्ने अवस्था छ । महिना दिन अघिको चालक र ३० औं वर्ष दुर्घटना नगरी चलाएको चालकलाई ट्राफिकले उस्तै व्यवाहार गर्छ ।’
चालकले मान्छे त के कमीला पनि मार्न नचाहने उनको भनाइ छ । तर अरुलाई बचाउन खोज्दा धेरै दुर्घटना हुने उनले बताए । पूर्व नेपाल यातायात व्यवसायी संघका वरिष्ठ सल्लाहाकार भवेशकुमार श्रेष्ठ बजारको बीचमा होटल अगाडि साँझ पर्न लागे पछिका मापसे चेकीङले दुर्घटना कम नहुने बताउँछन् ।
सडकको क्षमताभन्दा यातायातका साधनलाई रुट प्रमिट दिइने अनि दुर्घटनाको दोष चालकमाथि थोपर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्ने उनी बताउँछन् । चालकलाई लाइसेन्स मात्र होइन तालिम पनि दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘एकपटक ज्यान मारेका चालक २७ दिनका दिन फेरि स्टेयरिङमा बसिसकेको हुन्छ,’ उनले भने, ‘कम्तीमा ६ महिना गाडी चलाउन दिनु हुँदैन ।’
दुर्घटनाको मुख्य करण ‘थ्रि एल’ भएको ट्राफिक प्रहरीको दावी छ । व्यवसायीको लालच, चालकको लापरबाही र यात्रुको लाचारीका कारण दुर्घटना बढेको ट्राफिक प्रहरीको भनाइ छ ।
पूर्वका १६ जिल्लामा १ सय २५ किलोमीटर पक्की सडक छ भने १ हजार ७ सय ५० किलोमीटर ग्राभेल सडक छ । ३ हजार ५ सय ३३ किलोमीटर सडक कच्ची छ । यी सडकमा ३ लाख ५० हजारको हाराहारीमा सवारी साधन चल्ने गरेको अनुमान छ । पुर्वमा ४ सय ५८ जना ट्राफिक प्रहरी कार्यरत छन् ।
दुर्घटनामा मृत्यु भएका पत्रकार कर्ण शाहीकी पत्नी कलावतीको अहिले पनि चाडबाड भनेपछि मुटु थरर्र काँप्छ । अनुहारको चमक एकाएक हराएर मलीन बन्छ ।
२०७१ असोज २० गते जोरायल बस दुर्घटनामा दसैंको टीका लगाएर फर्किंदै गरेका पति गुमाएकी कलावतीलाई विगतको पीडाले झस्काइरहन्छ । ‘चाडबाड नआइदिए हुन्थ्योजस्तो लाग्छ,’ कलावतीले भनिन्, ‘वर्ष दिनमा खाटो बस्न लागेको घाउ दसैं–तिहारका बेला उप्कन्छ, चहराउँछ ।’
सुदूरपश्चिममा मौलिक रूपमा मनाइने विशुपर्वका लागि पुख्र्यौली थलो जिजौडामाण्डांै जान लागेका वरिष्ठ संस्कृतविद् तथा पद्मकन्या क्याम्पसका सहायक क्याम्पस प्रमुख जयराज पन्तसहित ८ जनाको मृत्यु २ वर्षअघि जिप दुर्घटनामा भयो । जन्मथलोमा विशुपर्व मनाउन तथा सप्ताह लगाउन गइरहेकै बेला आफ्नै गाउँ जिजौडामाण्डौंमा जिप खसेर मृत्यु भएपछि पन्त परिवारका लागि पनि चाडबाड र पर्व खल्लो बन्दै आएका छन् ।
यो वर्ष पनि २ छुट्टाछुट्टै बस दुर्घटनामा ५ जनाको तिहारअघि मृत्यु भएको छ । गत असोज ३० र कात्तिक २ गते जोरायल गाउँपालिका र बड्डीकेदार गाउँपालिकामा दुर्घटना भएको थियो । बड्डीकेदार गाउँपालिकामा भएको दुर्घटनाले वडा नं. ४ मान्नाकापडी तिहारअघि शोकमा डुब्यो ।
यी प्रतिनिधिमूलक दुर्घटना हुन् । डोटीमा हुने सवारीसाधन दुर्घटनाले बर्सेनि चाडपर्व खल्लो बनाउँछ । क्षेत्रीय ट्राफिक प्रहरी कार्यालय अत्तरियाका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक सुरेन्द्र पालका अनुसार तिहारका दिन बढी सवारी दुर्घटना भएको अनुभव सुनाउँछन् ।
उनका अनुसार सुदूरपश्चिमको पहाडी राजमार्गमा हुने ठूला दुर्घटना चाडबाडकै बेला भएका छन् । ६० प्रतिशतभन्दा बढी दुर्घटना चाडबाडमै हुने गरेको उनको अनुभव छ ।
कार्यालयका अनुसार ७ नम्बर प्रदेशमा आव ०७१/७२ को गत असोज मसान्तसम्ममा ४ सय ३५ जनाको सवारीसाधन दुर्घटनामा मृत्यु भएको छ । ७ सय १५ सवारी साधन दुर्घटना हुँदा ५ सय १६ जना सख्त घाइते भएको तथ्यांक छ ।
क्षेत्रीय ट्राफिक कार्यालयले त्रिवर्षीय दुर्घटना विवरण हेर्दा प्रत्येक वर्ष दुर्घटना हुनेको संख्या बढदै गएको पाइन्छ । ‘चाडबाडकै बेला दुर्घटना हुनु संयोग मात्र होइन, यसका विशेष कारण छन्,’ उनले भने, ‘मानिसहरूको चाडबाडकै बेला आवतजावत बढी हुने, थरीथरीका मानिसहरू यात्रा गर्ने भएकाले चाडबाडका बेला दुर्घटना हुने गरेको हो ।’
चाडबाडका बेला दर्जनौं सवारीसाधन सुदूरपश्चिममा थपिने गरेका छन् । घटना पनि दोहोरिरहेका छन् । तर पनि चाडबाडका बेला यात्रुलाई सुरक्षित रूपमा गन्तव्यमा पुर्‍याउन सरोकारवालाले ठोस योजना भने बनाउन सकेका छैनन् ।
‘यात्रु आउन सक्ने संख्याको अनुमान गरी सहज रूपमा सवारीसाधन परिचालन गरे कोचाकोच गरी यात्रु चढ्नुपर्ने बाध्यता रहँदैन,’ डोटी उद्योग वाणिज्य संघका कोषाध्यक्ष रमेश जोराले भने, ‘थोरै सवारीसाधन भएपछि धेरै यात्रुले जसरी पनि घर जानुपर्नाले यस्तो भएको हो ।’ जोराको कुरालाई शैलेश्वरी यातायात व्यवसायी संघका अध्यक्ष गणेश मलासी फरक रूपमा स्विकार्छन् ।
मलासीले यात्रुको संख्यालाई पहिल्यै अनुमान लगाएर सवारीसाधन परिचालन गर्न व्यावहारिक रूपमा कठिनाइ हुने बताए । ‘यात्रुबाट पूर्वजानकारी भयो भने सवारीसाधनको परिचालन गर्न सकिन्छ,’ मलासीले भने, ‘तर मुनाफामुखी व्यवसाय भएकाले यात्रु आउने/जाने ग्यारेन्टी नहुँदासम्म यकिन गर्नै सकिँदैन, घाटा खाएर कोही हिँड्न मान्दैनन् । त्यसबाहेक चाडबाडका बेला दुर्घटना भए मात्र यात्रु बोक्ने सवारीसाधनमा कडिकडाउ गरे पनि विस्तारै त्यो कुरा सबैले बिर्संदै जाने प्रवृत्तिले दुर्घटना दोहोरिरहने गरेका छन् ।’ उनले विद्यार्थी, चालक, सवारी मालिक र युवामाझ गएर विभिन्न अभियान चलाउने तयारी भइरहेको पनि जानकारी दिए ।